Dukaan Dukaamada dharka ee ragga ayaa had iyo goor bixiya agab dhexdhexaad ah oo si xun u saameeya niyadda booqdayaasha sidaas darteedna hoos u dhigaysa boqolkiiba iibka. Si loo soo jiito dadka ma aha oo kaliya inay soo booqdaan dukaan, laakiin sidoo kale inay iibsadaan alaabada halkaas lagu soo bandhigay, booska waa inuu dhiirrigeliyaa oo uu siiyaa farxad wanaagsan. Taasi waa sababta naqshadda dukaankani u adeegsaneyso astaamo gaar ah oo lagu dhiirigelinayo farshaxanka tolidda iyo faahfaahinta kala duwan ee soo jiidan doonta dareenka isla markaana ku faafi doonta niyadda wanaagsan. Qaab-dhismeedka bannaan ee loo qaybiyey laba aag ayaa sidoo kale loogu talagalay macaamiisha xorriyadda inta ay wax iibsanayaan.
Sabti 23 Bisha Koobaad 2021
Degenaanshuhu Gurigii Shkrub wuxuu ka muuqday jacayl iyo kalgacayl - lamaane jacayl leh oo leh seddex caruur ah. DNA-ga ee guriga waxaa ku jira qaab dhismeedka mabaadi'da qurxinta ee ka helaya dhiirrigelinta taariikhda Yukreeniyaan iyo dhaqan dhiirigeliyay xigmad Japan. Cilmiga dhulka oo ah shey ayaa naftiisa dareemaya in qaab dhismeedka guriga, sida saqafka asalka ah ee asalka ah iyo darbiyada dhoobada qurxan ee quruxda badan oo cufan. Fikradda dhiibashada sujuudnimada, oo ah meel aasaas u ah, ayaa laga dareemi karaa guriga oo dhan, sida dunta jiheeka ah ee jilicsan.
Barkadaha Dabbaasha Fayo-qabka Qoyska ee Termalija ayaa ah tii ugu dambeysay mashruucyo taxane ah oo Enota uu ka dhisay Terme Olimia shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuuna ku soo gabagabeynayaa bedelka dhameystiran ee dhismaha iswada. Waxaa laga dheehan karaa masaafada, qaabka, midabka iyo cabirka qaab dhismeedka cusub ee mugga tetrahedral waa isugeyn waaxeed ee dhismayaasha miyiga ku hareereysan, iyagoo aragga lagu sii dheereyo bartamaha dhismaha. Saqafka cusub wuxuu u shaqeeyaa sidii hooska xagaaga oo waa weyn oo ma urursado meel kasta oo qaali ah oo bannaanka ah.
Khamiis 21 Bisha Koobaad 2021
Nashqadeynta Gudaha Eataly Toronto waxaa loogu talagalay inay wax ka qabato horumarka magaaladeena sii kordheysa waxaana loogu talagalay in lagu wanaajiyo oo kor loogu qaado isweydaarsiga bulshada iyada oo loo marayo kobcinta caalamiga ah ee cuntada weyn ee Talyaani. Waxaa haboon oo keliya in dhaqankii iyo raagtaydii “passeggiata” ay tahay dhiirigalinta ka dambeysa naqshada Eataly Toronto. Caadada waqtigan aan caadiga ahayn waxay arkeysaa dadka reer Talyaani inay fiid walba qaadaan wadooyinka waaweyn iyo buudhka, si ay ugu lugeeyaan oo ula falgalaan oo mararka qaar u istaagaan baararka iyo dukaamada. Khibradaha isdaba jooga ah waxay ku baaqayaan qaab cusub oo waddo isku xir ah oo Bloor iyo Bay ah.
Arbaco 20 Bisha Koobaad 2021
Mustaqbalka Wadooyinka Tareenka Ee Fudud Ee Magaalada
Talaado 19 Bisha Koobaad 2021
Mustaqbalka Wadooyinka Tareenka Ee Fudud Ee Magaalada Xariirka Fudud (Light Portal) waa mashiinka ugu weyn ee Yibin Highspeed Rail City. Dib-u-habaynta hab-nololeedka ayaa ku talisa dhammaan da 'kasta sanadka oo dhan. Waxa ku xiga Yibin Xawaaraha Xawaaraha Sare kaas oo shaqeynayay ilaa Juun 2019, Yibin Greenland Center wuxuu ka kooban yahay 160m oo isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan qaab dhismeedka iyo dabeecadda 1km ee muuqaalka dhulka dheer. Yibin wuxuu leeyahay taariikh in kabadan 4000 sano, oo aruurisa xigmad iyo dhaqan sida qulqulka webiga oo calaamad u ah horumarka Yibin. Mataanaha loo yaqaan 'mataanaha loo yaqaan' Towin Towers 'waxay u adeegaan sidii marin fudud oo lagu hago dadka soo booqda sidoo kalena astaan u ah dadka deegaanka inay isugu yimaadaan.
GlassOn 40 "tv Horseeday Isniin 1 Bisha Saddexaad
Tango Pouch Boorsada Gacanta, Boorsada Fiidnimadu Axad 28 Bisha Labaad
1x3 Miiska Qaxwaha Sabti 27 Bisha Labaad
Dukaan Degenaanshuhu Barkadaha Dabbaasha Nashqadeynta Gudaha Tusale Mustaqbalka Wadooyinka Tareenka Ee Fudud Ee Magaalada